China Ụzọ Ejiri Agbanwe Ala China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ụzọ Ejiri Agbanwe Ala - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ụzọ Ejiri Agbanwe Ala)
Ebe nchekwa anyị dị na 240w malite na akpaghị aka na mgbede, na-emechi ya mgbe ọpụpụ, 31200 lumen output, 100-277V AC ọsọ ọsọ. Ụzọ a dị n'okporo ụzọ na-enwu gbaa nwere ike dochie anya 800W HID HPS MH ìhè. Na Best Dugara ụzọ Ìhè bụ oké na-egbuke egbuke na inogide oriọna maka ụlọ, n'ogige, ụgbọala, yad,...
Igwe ọkụ ọkụ dị elu na-adọba ụgbọala mpempe akwụkwọ 500W
Nke a dị elu na-emepụta 500W High Mast Lighting Design nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Ụlọ elu nke nnukwu ụgbọ elu na-adọba ụgbọala dị mma maka ịmalite nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na egwuregwu dịka ụlọikpe basketball, ụlọ tennis na ogige bọl. Nnukwu Oké Ahịa Dị elu a bụ IP65 ma chebe ka e ghara imikpu mmiri. Ụdị...
Ugbo ụgbọala na-adọkpụ n'èzí 500W kpatara iju mmiri
Ugbo ụgbọala na-adọkpụ n'èzí 500W kpatara iju mmiri Bbier na-ewepụta ìhè ọkụ 500W maka nnukwu ụlọ ime ụlọ na n'èzí n'èzí, ma ọ bụ ohere ọ bụla ọzọ dị mkpa nke ọma na ọkụ ọkụ. Ngwá ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ a na-emepụta ihe ọkụkụ na-enye ezigbo ìhè ọkụ na oge efu. IP66 - Nke a na-eguzogide ọgwụ ọkụ na mmetụta...
Ụzọ Mgbagwoju Anya Okporo Ụzọ 100W na Batrị
The Light Street Light 100w bụ 7400lm na 6-7 awa na-akwụ ụgwọ oge. Nke a 100w Igwe ntanetị nke Ahịa Obere Igwe Na-ahụ Maka Batrị bụ 8-9, na okpomọkụ okpomọkụ bụ 5000K. The 100w Solar Street Light n'Aka njikwa nwere anyanwụ ogwe na n'elu nke a unit banye ìhè anyanwụ n'ehihie ma mgbe ahụ LEDs iji nke a ume...
30W Ụzọ Mbara Igwe Ọdịda Anyanwụ na-enwu na Otu
Owuwu Anyanwu Anyanwu nke 30w bụ ihe ngwọta kachasị mma maka mkpa nchekwa ọkụ dịpụrụ adịpụ. A na-enye igwe a na-enwu gbaa 30-watt (850 Lumen) nke na-enwu ọkụ na mpaghara 30'x 30 'na mpaghara panel nke nwere ike iji rụọ ọrụ n'ime batrị lithium na usoro nchịkwa na-enye ọnọdụ siri ike, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ...
300W Ụlọọrụ ụgbọala na-adọba ụgbọala ọkụ bọmbụ na-agbanwe maka ire ere
Ebe anyị na- adọba ụgbọala na bọmbụ ụgbọala 300W bụ 130lm / w na 39000lm na Mpempe akwụkwọ Mpempe ụgbọala nke Mpempe ụgbọala nke a 300w nwere ike dochie HPS / HID 10 00 watt . Ogwe Mpempe ụgbọala nke Ogwe Mpempe ụgbọala maka ire ere bụ Ụdị mmiri 3M na IP65. Anyị bụ ndị na- emepụta ihe ọkụkụ na-adọba ụgbọala ma a...
Igwe Mpempe Epeepe Mpempe akwụkwọ 150w nwere nnukwu nsonaazụ ọkụ na 19500lm. Nke a na- agba mpempe ụgbọala nke ọhụụ 150W nwere ike dochie 400 watt HPS / HID. Ụgbọaka ụgbọala anyị nke ọkụ ọkụ bụ ụdị 3M na IP65. Nke a na- eji ogwe oghere na-adọba ụgbọala eji ere enwere ike iji ngba ụgbọala, n'okporo ámá, ụlọ...
Ejiri okporo ụzọ Led Street 150 Watt na sensọ Photocell
Ụzọ Anyị Led Street 150 Watt nwere mpempe ọkụ dị elu karịa 19500lm karịa ìhè ọdịnala. Nke a Led Street Light 150w Ahịa nwere ike ịfe ihe dị mma iji dochie 400 watt HPS / HID. Led Street Light Osram bụ 130lm / w na 150lm / w. Nke a mere ìhè okporo ụzọ na foto foto bụ Ụdị 3M na ngwa ngwa okporo ámá anyị na- eduzi bụ ebe...
Ejiri okporo ụzọ ndị dị n'ubi na-acha ọkụ ọkụ Fxiture 20W na anyanwụ
Ejiri okporo ụzọ ndị dị n'ubi na-acha ọkụ ọkụ Fxiture 20W na anyanwụ Njirimara: 1. Nchebe ndi mmadu na ndi mmadu, ndi mmadu nwere ike ime gburugburu ebe obibi. 2.Otu jijiji, mgbochi mmiri, enweghị ntighari, enweghị ihe ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4.Ibu akwa...
Ụzọ Ejiri Agbanwe Ala Ejiri Agbanwe Aja Ụzọ a na-agbanye ala Ụzọ Ugbo Ala Okporo Ụzọ Ejiri Ala Na-enwu Ejiri Mgbanwe 200w Okporo Ụzọ Mgbagwoju Anya Hụ Ndochi Agbanwe